Shabakada “Sky Sports” oo shaacisay xiliga ay sida rasmiga ah ugu dhawaaqi doonto Juventus heshiiska Ramsey – Gool FM
(Juventus) 17 Jan 2019. Sida laga soo xigtay wargeysyada talyaaniga, laacibka reer Weles ee Aaron Ramsey ayaa heshiis hordhac ah la gaaray kooxda Juventus, isagoo rajeynaya inuu si rasmi ah ugu biiro xagaaga soo aadan.
Shabakada “Sky Sports” ayaa waxay shaaca ka qaaday in kooxda Juventus ay kula soo wareegi doonto Arsenal laacibkeeda reer Weles ee Aaron Ramsey beeca xurta ah xili ciyaareedka soo aadan, kadib marka uu soo idlaado heshiiskiisa.
Shabakada ayaa sheegtay in Juventus ay si rasmi ah ugu dhawaaqi doonto bisha soo socota saxiixa Aaron Ramsey, kadib marka uu tijaabada caafimaadka ka gudbo isbuuca soo aadan.
Aaron Ramsey ayaa horey lala xiriirinayay inuu ku biirayo kooxo badan sida Paris Saint-Germain iyo Bayern Munich, laakiin Juventus ayaa xili kasta ahayd dooqa koowaad ee laacibka reer Weles.
Si kastaba Aaron Ramsey ayaa wuxuu yimid kooxda Arsenal sanadii 2008, isagoo kaga soo biiray Cardiff Cit, wuxuu dhaliyay 53 gool, kadib 253 kulan uu u ciyaaray Gunners.